जिवनको ३० वर्ष भित्रैमा बलिउडका चर्चित नायक आमिर खानको दोस्रो विवाह पनि असफ`ल भयो । उनले दोस्रो विवाह गरेको १५ वर्षमा दोस्री पन्ती किरण रावसँग पनि अलग भए । उनको पहिलो विवाह ३० वर्ष अघि छुटेको थियो । आफ्नो सानै देखिको साथी रहेकी रिना|लाई उनले पहिलो श्रीमती बनाएका थिए । दोस्रो विवाह भएको १५ वर्षपछि अलग भएका छन् । दुई जना मिलेर एक अर्काबाट टाढी`ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुको १ छोरा छन् । उनीहरुबीच छोरा आजादको हेर`चाह दुवै मिलेर गर्ने सहम`ति भएको छ । आमिर र किरणको सम्बन्ध विच्दे`छ भइरहदाँ सामाजिक सञ्जालमा अर्की अभिनेत्री फातिमा सना शेखलाई बधाईको ओइरो लागेको छ । फातिमा कारण किरण`संगको सम्बन्ध वि ग्रि एको अनुमान लगाइ`एको छ । भारतीय मिडियाले यस्तै दावी गरेका छन् । आमिर र किरणको अलग हुनुमा फातिमाको ठुलो हात छ भन्दै उनलाई बधाई दिएका हुन् । दं ग ल फिल्ममा आमिरले फातिमासँग काम गरेका थिए ।
अहिलेका युवा युवती हरु सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउने गर्छन् । कसैले यसको राम्रो सदुपयोग गर्छन् त कसैले समय कटाउने माध्यम मात्र बनाउँछन् । सामाजिक सञ्जाल आफ्ना कला, प्रस्तुति र लेख रचना हरु प्रस्तुत गर्ने राम्रो माध्यम हो । सामाजिक सञ्जालको भीडमा पछिल्लो समय टिक टक निकै लोकप्रिय बन्न पुगेको छ । कलाकार ,पत्रकार, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी लगायत सम्पूर्ण वर्गका मानिस का लागि आफ्नो कला र मनोरञ्जन लिने दिने राम्रो प्ल्याफर्म बनेको छ टिक टक । बढीमा एक मिनेट सम्म भिडियो गर्न पाइने टिक टक मा नेपाली हरु पनि निकै लोभिएका छन् । त्यस्तै मा सुरक्षा कर्मीले पनि एकछिनलाई थकान तनाव बिर्सिएर टिक टक मा रमाउने गरेको देखिन्छ । यस्तैमा युट्युव मा महिला प्रहरीको टिक टक को लागि बनाईएको भिडियोले धेरै भूज पाएको छ । युट्युव को छोटो भिडियो अन्तरगत रहेको उक्त भिडियो ४१ लाख बढीले हेरेका छन्
बलिउडका ‘किङ खान’ शाहरुख खानको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? हेर्नुहोस्
बलिउड'मा किङ अफ रोमान्स मानिने सुपुरस्टार शाह:रुख खान सोमबार ५५ वर्ष पूरा भएका छन्। उनका फ्या'नका लागि यो दिन उत्सव हो। जन्मदि'नमा उन:को एक झलक पाउन उनको घर मन्नत अगाडि हजारौं फ्यान घन्टौं प्रतिक्षा गर्छन्। तर यसपल्ट कोरो'नाले त्यो हुनेछैन। टिभीमा अभिन'य सुरु गरेर फिल्म'मा आएका शाहरुअले 'फौजी' र 'सर्कस'बाट आफ्नो करि'यर सुरुवात ग:रेका थिए। यी ३० वर्षमा उनले दर्जनौं हिट फिल्म दिएर आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। दिव्या भारती र ऋषि कपुरसँग दि:वाना फिल्मबाट शाहरुख खान देखिएका हुन्। सन् १९९३ मा उनले केही यस्ता फिल्ममा काम गरे। त्यो समय यस्ता हिरो त्यस्ता भूमिका'मा खाशै रु'चि राख्दैनथे। निर्देशक अब्बास–मस्ता'नको फिल्म बाजि'गरमा शाहरुखअ खानले यस्तो हिरोको भूमिका निर्वाह गरे, जहाँ हिरोइन (शिल्पा शेट्टी)लाई मारिदिन्छन्। यस्तै यश चोपडाको 'डर'मा शाहरुख खानले एकत:र्फी प्रेम रहेको प्रेमीका भूमिका
बलिउड सुपरस्टार आमिर खान र रेखाबिचको लफडा के हो ? थाहा पाउनुहोस्
८० र ९० को दशकमा भार'तमा आफ्नो अभिनय कला मार्फत चमत्कार देखाएर चर्चा:मा आएकी सुन्दरी हुन् रेखा ।कैयौँ प्रशंस'कहरुको बीचमा रेखाको प्रशंसा बढीरहेको भएता पनि उनले चलचित्र छायांक:नको सेटमा देखाएको व्यवहारले आमिर खान भने अहि:ले पनि दुखी छन् । भारतीय मिडिया:का अनुसार आमिर खानले निकै समय पहिले नै रेखासँग काम गर्ने निर्णय गरेको भएता पनि रेखा:ले फिल्मको सेटमा देखाएको व्यवहारले आमिरले अहिलेसम्म कुनै फिल्ममा पनि काम गरेनन् । धेरै समय अघि रेखा:लाई भेटेको भएता पनि आमि:रले रेखाले फिल्मको सेटमा देखाउने व्य'वहार निकै गहिरो रुपमा अध्ययन गरे र आमिरले उनीसँग काम नगर्ने निष्कर्ष निकाले । रेखाको काम गर्ने शैली र सुस्त'ताका कारण फिल्मको शुट बारम्बार दोहोर्याउनु परेको कारण आमिर हैरान परे:को बताइन्छ । यद्यपि, रेखा आफ्नो समयको सुपर स्टार नै हुन् । तर बलिउडका ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान'का फिल्महरु अ
नायक पल शाह र रियासा दाहाल बीच भब्य रुप'मा सुटुक्क बिबाह भएको छ। उनीह'रुको सुटुक्क बिबाह भएको हो।मिडिया पुग्दा पल र रियासा बेहुला बेहुलीको भेषमा देखि:एका थिए । सोहि क्रममा पत्रकारले रियास'लाई कस्तो हुदै छ बिबाह भनेर प्रश्न गर्दा उनले यो दोश्रो बिहे हो मेरो भनेपछि पल अकमक्क भए। तर यो सब एक गीतको सुटि'ङ्गको दृश्य रहेको छ डी ए आर मुभिजले निर्माण गरेको एक गीतमा उनीहरु देखिएका थिए।गीतमा पल र रियासाको साच्चै बिबाह होकी भन्ने दे'खिन्छ तर बास्त'बिकता भने बाहिर दे'खाएका छैनन्। प्रभावन जे र भारतीय गायिकाको आवाज रहेको उक्त गीतमा पल लाइ बेहुला र रियास'लाई बेहुली देखिन्छ। हेरौ बाँकी भिडि'योमै रमाईलो गरौ ...
नेपालमै जन्मियो यस्तो अचम्मको नानी, खुट्टाको बिचमा अनौठो डल्लो (भिडियो सहित)
काठमाडौ । चितवनमा फेरी अर्को घ’टना भएको छ । त्यहाँका एक दम्पत्तीले एक छोरी'लाई जन्म दिए । तर बच्चा अनौठो जन्मियो । पुर्वी चितवन पर्सा भरतपुर नगरपालि'काकी महिला'ले नर्मल रुपमा बच्चा जन्माएकी थिइन् । बच्चा जन्मिएप'छि शिशुको श’रिरमा अनौठो ड’ल्लो थियो । दुई खुट्टाको बिचमा निकै ठुलो मा’सुको डल्लो रहेको देखि'एपछि उनीहरुले शिशुलाई लिएर चितवनकै अस्पताल पुगे । त्यहाँको अस्पता'लले उनीहरुलाई त्यो शिशुलाई काठ'माडौ लिएर जानु । कान्ति बाल अस्पताल'मा लिएर जान सुझाव दिएपछि काठ'माडौ आएका छन् । तर उनीहरुको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भ'एका कारण शिशुको उप'चारमा कति पैसा लाग्छ भन्ने था'हा पाएनन् । शिशुको एमआरआइ गर्नुपर्ने सुझाव अस्पताल'ले दियो । तर एमआरआइ गर्ने स्थानमा जाँदा त्यहाँ २३ हजार रुपैया लाग्ने बताएपछि उनीहरु निकै आ’त्तिएका छन् । घरमा दुई छाक खाने अन्न पनि नभएका यि दम्पत्तीलाई उप'चारमा यति
कोमाछा पालन एउटा कृषि व्यव'साय हो । तराईका विभिन्न भूभागमा यो पेसा ब'ढ्दो क्रममा छ । माछा पोषण'को रूपमा प्रयोग गरिने प्रोटिनको एक प्रमुख स्रोत हो । माछा सुपाच्य हुनुका साथै यसमा १५–२० प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ । यसको अलावा माछालाई सगुनको रूपमा लिइन्छ । माछालाई पोखरी, ताल, नदी, धान खेत तथा अन्य जलाशयहरूमा पालन् गरिन्छ । व्यावसा'यिक रूपमा पालिने माछाहरू हाल ७ प्रकारका रहेका छन्, जसमध्ये ३ स्वदेशी र ४ विदेशी जातका छन। यी सुन्दरीको माछा मार्ने रमाइ"लो तरिका यहा हेर्नुहोस भिडियो....
बाल गायिका कमला घिमिरेले गाइन आफ्नै मामासङ्गको पहिलो यती मिठो गीत (भिडियो सहित)
दोहोरी गाएर एकाएक चर्चामा आएकी बाल गायिका कमला घिमिरेका यती बेला जती गीत बजार आएका छन सबैलाई दर्सकहरुले रुचाएका छन । पहिलो गीत चि'या छानेर बाट औप'चारिक गीत रेकर्डको यात्रा सुरु गरेकी कमलाले आज को सिन सम्म आइपुग्दा ९ वटा भन्दा धेरै गीत रेकर्ड गरेको उनी बता:उछिन। उनका बजार आए'र धेरै मन पराइएका गीत हरुमा चिया छानेको, जिन्दगी, एउटा फिल्को गीत, तीज गीत लरि'लरी लै मन परेको भेना,मासको मस्यौरी लगा'एतका गीत हरु हुन । तेस्तै भर्खरै मात्र मामा बि'क्रम सङ्ग उनले एउटा निकै आसालाग्दो गीत गाएकी छन , जुन गीत भाईरल कमला घि'मिरे र बिक्रम छेत्रीले गाएका छन भने शब्द श्री'जना नेत्र अर्यल को छ। लय सन्क'लन रोशन पारीयारले गरेको यो गीतलाई मेसना डि'जिटल ले बजार पठाउने जानकारी दिएका छन । अहिले भर्खरै रेकर्ड गरिए'को गीत डो'को बुनेर अनी पछील्लो सांगीतिक यात्रा'को बिषयमा गरिएको कुराकानी हेर्नका लागि तलको लि
भाइरल जिया भुषाल किन एकाएक डाको छाडेर रोइन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
पछिल्लो सम'यमा अत्यन्तै भा'इरल भएकी ६ बर्षे जिया भुसाल भिडि'योमा पहिलो पटक आफ्नो अभिनय देखाउने मौका पाएकी छिन। जियालाई उनकै मामा निर्देशक बिष्णु भट्टराईले दशैँ गीत “रातो धागो ” मार्फत कलाकारितामा अघि बढाएका छन् । पूर्ण'कला बिसी र नारायण थापाको स्वर रहेको छ भने कृष्ण थापाको शब्द रहेको छ । नारायण थापा'को लय र:हेको गीतको भि:डियोलाई बिष्णु भट्टराईले निर्देशन गरेका छन् भिडियोमा सन्तोष शर्मा , परि शर्मा, जिया भुसाल लगाएतको कलाकारको दर्दनाक अभि:नय रहेको छ । परदेशि:एका युवाको कथा लाइ समेटि:एको छ भने अल्पायुमै श्रीमानले संसार छोडेर गएप:छि श्रीमती र लालाबालले पाउने पि'डा भि'डियोमा मनै छुने गरि प्रस्तुत गराइएको छ। अविरल फिल्म्स'को बजार ब्यबस्था'पन तथा दृश्य निर्माणमा बजारमा सार्बज'निक भएको भिडि'योमा सगुन शर्माको श्रीन्गार रहेको छ, निर्माण पक्ष्यले अत्यन्तै आशा गरेको गीत “रातो धागो” को पु
‘बोल माया’ पछि ‘गलबन्दी’ गीत गाएर शान्ति श्री परियार दर्शक तथा श्रोतामाझ लोकप्रिय बनेकी छिन् । शान्ति श्री सँगै उनकी बहिनी ज्ञानु परियार पनि राम्रो गीत गाउँछिन् । उनले हालै ती:ज गीत गाए'की छिन् । दिदिबहिनीको स्वरमा यो बर्षको तीज कोसेली ‘फुलमती चनमती’ अहिले जताततै सर्वाधिक च'र्चामा रहेको छ, ‘जस्मा चर्चित मोडेल अञ्जलि अधिकारीले अभिनय गरेकी छिन् । शान्तिश्री कि आफ्नै कान्छी बहि:नी ज्ञानु परियार ला'मो समय देखि सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो नाम पहि:चान बनाउन संघर्ष गरिरहेकी बता:उँछिन् । दिदिकै प्रेरणा:ले यो क्षेत्रमा आएकी ज्ञानुको पनि स्वर सुमधुर छ ।दिदिबहिनी सँग ग:रिएको रमाइलो कुराकानी भिडि'योमा हेर्नुहोस् ।